Fedora 26 LXQT, iyo nyowani spin ichauya iyi 2017 | Linux Vakapindwa muropa
Munguva pfupi yapfuura isu takadzidza kubva kune yekutumira runyorwa hutsva kana spin yeFedora iyo inosvika gore rino. Iyo nyowani yepamutemo kana yekuruka flavour inoshandisa iyo LXQT desktop sedesktop huru. Yekutanga yepamutemo vhezheni yeiyi nyowani flavour kana spin ichave Fedora 26, iyo vhezheni inotisvitsa isu kutenderera pakati-2017.
Chinhu chinoshamisa ndechekuti Fedora 26 ichave nemaphini maviri akafanana, imwe ichave Fedora LXQT uye imwe ichave LXDE, maviri angangoita akafanana madhesiki anoita kunge anogara mukati merondedzero yeshanduro iyo Fedora irinayo parizvino.
Munhu anotarisira kuita chiziviso ichi ave Jan Kurik, mumwe wevanogadzira chirongwa cheFedora uyo akatsigira kuvepo kweiyi tavhu nyowani pasina kusimbisa kubviswa kweLXDE spin, iyo ichiri kuda kuziva kune vazhinji vashandisi.
LXQT idhisheni inowedzera kugadzikana uye yakakura asi sechiedza
LXQT idhesiki iro rinowanikwa mune yepamutemo Fedora repositories kubvira vhezheni 22, asi haisati yambofungidzirwa kusvika zvino nekuda kwekusagadzikana kwayo. Iyi desktop parizvino chirongwa chakakura chakakwanisa kugadzirisa zvinobudirira marara eQT munzvimbo yeLXDE. Ndosaka timu yeFedora yasarudza kuisa iyi desktop semukuru anotenderera.
Fedora 26 budiriro ichatanga mwedzi unouya, zvirinani zvinoenderana nerekarenda repamutemo, kuburitsa vhezheni yekuvandudza iyo inosanganisira nhau dzeFedora 26 mune yazvino vhezheni yeiyi lightweight desktop ichave iripo.
Zvishoma nezvishoma LXQT iri kuve isingaremi sarudzo yekugovera kwakawanda, asi ichokwadi icho ese anotsiva LXDE neiyo LXQT nyowani. Nekudaro, ini ndinotenda kuti Fedora ndiyo yekutanga kugoverwa kweGnu / Linux iyo isingogadzirise chete LXQT asi inochengetedza LXDE, zvirinani kwenguva pfupi ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Fedora 26 LXQT, iyo nyowani spin ichauya iyi 2017
Kwazisai vese vashandisi, vashandisi veInternet venyika yelinux uye kunyanya veFedora Linux, ndiri kushandisa iyo Fedora 25 LXDE 64 Bit Distro paPC ine zvinotevera hunhu:
Intel (R) Pentium (R) 4 CPU vhezheni
Yekunze wachi 200 MHz
Wakawanda maawa 4000 MHz
Ikozvino Clock 3000 MHz
Central processor Rudzi
Socket 478 kugadzirisa
Soketi 775 socket chitupa
Motherboard Zita Gigabyte GA-8S661FXM-775 rev 1.0
Main bhazi zvivakwa:
Intel GTL + bhazi mhando
64 bhiti yakafara upamhi
Yechokwadi Clock 200 MHz (QDR)
800 MHz inoshanda wachi
Ndangariro bhazi zvivakwa:
DDR SDRAM bhazi mhando
DRAM Ratio: FSB 1: 1
Yechokwadi Clock 200 MHz (DDR)
400 MHz inoshanda wachi
Bandwidth 3200 MB / s
Chipset bhazi zvivakwa:
Bhazi mhando SiS MuTIOL
16 bhiti yakafara upamhi
Vhidhiyo Kadhi: Nvidia EVGA Geforce 6200 512MB AGP
SOURCE: DELTA ELECTRONICS INC.
MUENZANISO: DPS-180KB-7C REV (): 0.0
LENOVO P / N: 41N3110 FRU N °: 41N3111
EC N °: J83592
S / N: AWLD 0623053174
OUTPUT; + 12V / 14A, -12V /0.3A
MAX SIMBA: + 5V / 12A, + 5VSB /2.0A
KUSVIRA SIMBA PANE + 3.3V & + 5v
CHETE: 65W MAX + 3.3V & 5V 65W
Ndinoda kuziva kubva pane zvakataurwa nezvePC, iyo Fedora 26 LXQT 64 Bit Operating System inoenderana uye inoshanda.
Iyo bhawa kana Paneri yeFedora 26 LXQT inogadziriswa kuiisa pamusoro pechiso.
Ndeapi mashini muchina, Hardware kana PC system zvinodiwa kuti uise Fedora 26 LXQT 64 Bit.
Ndatenda pamberi pezve rubatsiro rwenyu rwemutsa, kutarisisa uye nekukurumidza mhinduro.